Iividiyo ezine ezintsha ze-Apple ukubhiyozela uSuku loMhlaba | Ndisuka mac
Iividiyo ezine ezintsha zika-Apple ukubhiyozela uSuku loMhlaba
Ukuba kukho nayiphi na inkampani egxile kuyo ngoSuku loMhlaba ngalo Mgqibelo wango-Epreli 22 ngomnqweno, yile Apple. Inkampani yaseCupertino ayiyeki ukumilisela izindululo ezitsha njengokufezekiswa komsebenzi weApple Watch ezinokufezekiswa ngomso okanye ngoku ngothotho lweevidiyo ezijolise ekwenzeni ilizwe libone ukuba kubaluleke kangakanani ukubheja kumandla ahlaziyekayo kunye ukuba ngubani oyiphumezayo kwiApple Park yakhe. Iifama zelanga kunye neYak, ukubila okwenziweyo ukuvavanya izixhobo, ukunciphisa inkunkuma eveliswayo xa kusenziwa izixhobo zakho okanye indlela ecoceke ngokupheleleyo apho iqondo lobushushu liza kulawulwa kwiApple Park enomtsalane.
Ividiyo yokuqala epapashiweyo ibhekisa kwi- iiphaneli zelanga kwiifama zazo ezibuyisa umva ingca yezilwanyana kwaye ezi zinto zinegalelo ekugcineni izibonelelo ngaphandle kwamayeza kwaye zikwimeko entle. Le yividiyo:
Ividiyo yesibini ibhekisele kuyo ukubila okungekuko okwenziwa yiApple ukuvavanya izixhobo zayo kwinto eqhelekileyo ebantwini. I-Apple Watch, i-EarPods okanye ii-AirPods zizinto ezinxibelelana rhoqo nolusu kwaye kuyinto eqhelekileyo ukubila ukubachaphazela. Kwa-Apple bavavanya ukubila okungekuko ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kwiimveliso zabo:
Inkunkuma eyenzeka xa kusenziwa iimveliso ze-Apple okanye naluphi na uhlobo lwesixhobo esikhoyo ziphezulu ngokwenene. Ngale ndlela, iApple ibisebenza nabathengisi bayo ixesha elithile ukunciphisa inkunkuma kwaye kule vidiyo bayasibonisa:
Okokugqibela, abanakho ukungahoyi konke abakusebenzisileyo kunye neepaneli zelanga kunye neendawo zokungenisa umoya kwiprojekthi yabo enkulu yeApple Park. U-Apple usixelela ngoncedo lwe vumela umoya ukuba ungene okanye uvale igumbi ukufezekisa indawo efanelekileyo yokusebenza ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa amandla amaninzi kuyo:
Kwaye voila, uthotho lweevidiyo ezikhoyo konke okunxulumene ngqo noMhla woMhlaba ebibanjelwe ngomso kwaye ngokucacileyo inyusa inkolelo yokuba iApple ibheja kakhulu kolu hlobo lwamandla acocekileyo kunye nokukhathalela umhlaba esihlala kuwo kunye nokusinika iimveliso ezilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Iividiyo ezine ezintsha zika-Apple ukubhiyozela uSuku loMhlaba
IMadrid, iParis kunye neRoma bazokonwabela ulwazi malunga nezithuthi zikawonke-wonke ezivela kwi-Apple Maps kungekudala
I-Disk Cleaner Suite, ithengiswa ixesha elincinci